पोखरेलजी नाम जस्तै मधु - Dr. Nawa Raj Subba
2011-02-18 Dr. Nawa Raj Comments0Comment
बाफ् रे ! त्यत्रो शभामा सबैसामु उभिएकै बेला खस्नु पर्ने त्यो दाँतले ! त्यसमा पनि जब गजलवाचन गर्ने बेलामा नै खस्नु पर्ने त्यो वनावटी दाँतले ! यसरी मलाई त्यो दाँतसित रिस र मधुजीसँग हाँस उठ्न थाल्यो ।
कुरा गर्दै जाँदा वनावटी दाँतका थुप्रै किस्सा पनि सुनियो । केटी माग्न जाँदा रातीपख हाछिउँ गर्दा खसेको दाँत रातभर बत्ति बालेर खोज्दा पनि नभेटिएको तर सोही दाँत विहानपख कुकुरले चपाउँदै गरेको पाइएको जस्ता किस्सा सुनेपछि मलाई मधुजीको त्यो घटना सम्झेर निकै हाँसो उठ्यो । आज यो घटना भएको झण्डै छ महिना जति भयो होला तर अझै पनि मलाई हाँस उठिरहन्छ गजलकार मधुलाई देख्दा, भेट्दा ।
यो घटनाबारे लेख्न बस्दा म प्रफुल्लित छु तर केवल त्यही एउटा घटनाले मात्र भने होइन । वहाँसँग संगत भएको झण्डै डेढ दशक जति भयो होला तर मैले वहाँ रिसाएको देखेकै छैन । जहिले पनि प्रफुल्ल मुद्रामा म वहाँलाई देख्छु । सधै हाँसिखुशी बस्न रुचाउने, साथीभाई भने पछि हुरुक्कै हुने, रमाइलो गर्न पछि नहट्ने पोखरेलजी वास्तवमा नाम जस्तै मधु हुनुहुन्छ ।
जब वहाँको बोली माइकमा सुनिन्छ तब वहाँको आवाज एउटा कुशल गायकको जस्तो ओजपूर्ण ध्वनिमा गुन्जिन्छ कानमा मात्र हैन मुटुमा प्रतिध्वनित हुनेगरी । लयात्मक गजलवाचनका निम्ति जुन स्वर वहाँले पाउनु भएको छ त्यसको सटिक प्रस्तुती नै वहाँको विशिष्ठता हो, मैले देखेको कुरा ।
यति मात्र होइन वहाँ एउटा राष्ट्रसेवक पनि हुनुहुन्छ । वहाँले मेरो कार्यक्षेत्र जिल्ला जनस्वास्थ्यको प्रशासन शाखा समेत केही वर्षसम्हालिसक्नु भएको छ । जिल्ला विकास समिति मोरङको योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत जस्तो महत्वपूर्ण पदमा वहाँ बहाल रहँदा मैले पनि वहाँसित प्रत्यक्ष सहकार्य गरेको थिएँ । मोरङ जिल्लामा २०६१-६२ सालतिर हामी विराटनगरका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, विद्यार्थी, संचारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत मिलेर भव्य रूपमा सहिद मैदानमा विश्व एड्स दिवस मनाउँथ्यौं । त्यसबेला जिल्ला विकास समितिको एक ज्रिम्मेवार अधिकृतको हैसियतले वहाँले सभाको सन्चालन गर्दा प्रदर्शन गर्नू भएको वहाँको वक्तृत्वकलाले आमसभालाई एकसूत्रमा बाँधेको थियो । समुदायलाई तितरबितर हुन नदिई एकत्रित पारेर सभा सफल बनाउन वहाँको आवाजले ठूलो भूमिका खेलेको थियो, जो म कहिल्यै बिर्सने छैन ।
एकातिर एक राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने अनि अर्कातिर नेपाली वाङ्मयमा समर्पित रहनु पक्कै पनि चानचुने कुरो होइन । कविता, गजल, निबन्ध लगायतका विधामा जुन सिर्जना र साधना गरिरहनु भएको छ त्यसको म मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु । देशप्रेमयुक्त भावना वहाँका रचनामा प्रसस्त पाइन्छन् । वहाँले चितवनमा वाचन गर्नुभएको गजलको मतलामा पनि राष्ट्रप्रतिको चिन्ता मुखरित भएको छ ।
तिमीले भुल्यौ र पो देश दुख्छ
स्वयं मुस्कुरायौ र पो देश दुख्छ ।
यस अवसरमा म वहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । अस्तु ।